Horudhac (Barida Kala duwanaashaha Dhaqanka ee Qaxootiga) - CORENav
Jihaynta Dhaqanka waa waxbarashada kahor intaadan soogalin iyo kadib markaad soogasho wadanka ayna bixiyaan Xarumaha Taageerada Dib udajinta iyo Wakaaladaha Dib udajinta si lagaaga caawiyo inaad hesho aqoonta, xirfadaha, iyo fikradaha aad ugu baahantahay inaad laqabsato noloshaada Maraykanka aadna si buxda ugu milanto mujtamacaaga cusub.
Dib u eegista Barnaamijka Soodhawaynta iyo Meelaynta ee Maraykanka
Waxaa lagu siinayaa Casharada Jihaynta Dhaqanka labo jeer:
Casharka koobaad ee Jihaynta Dhaqanka waxaa kusiinaaya shaqaale tababaran oo kasocda RSC kahor intaadan usoo safrin Maraykanka. Cahsarkaan Jihaynta Dhaqanka wuxuu kuudiyaarinayaa dib udajintaada asagoo casharo farsamo ah kaasiinaaya dhaqamada iyo sharciyada Maraykanka. Waxay kaacaawinaysaa ahdaafta xaqiiqada ah aadna barato waxaad lakulmayso markaad soogasho. Waxay sidoo kale kuudiyaarinaysaa safarka.
Markaad Maraykanka soogasho, shaqalaha, qofka tababarka kuq aadanayo shaqo, iyo mutadawiciinta kashaqeeya Wakaaladaha Dib udajinta ayaa kugusoo dhawaynaaya inay kusiiyaan Jihaynta Dhaqanka ee u gaar ah bulshada kuu dhow. Sababtaas awgeed, saraakiisha dib udajinta qaarkood waxay uyaqaanaan Jihaynta Dhaqanka sida “jihaynta bulshada.” Jihayntan Dhaqanka waxay macluumaad farsamo kaasiinaysaa sida loola qabsado, shaqo looraadsho, loo helo adeegyada maxaliga ah sida daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada.
Casharada Barashada Dhaqanka ee markad soobaxayso iyo markaad timaado labadaba waa muhiim waxayna kaacaawinayaan inaad hormar kusamayso deegaankaaga cusub. Casharada Jihaynta Dhaqanku waxay leeyhinn adeegyo turjumaan waxaana lasiiyaa qaxootiyaasha cusub goob koox fasaleed ah ama, hadday muhiim tahay, qof-qof meelaha qaarkood.
Jahaynta Dhaqanku waxay kaacaawinaysaa inaad iskufilnaan gaarto si degdeg ah.
Mawduucyadaan ayaa lagugu barayaa intuu socdo Jihaynta Dhaqanka.